ကျွန်ုပ်တို့ အမှတ်တံဆိပ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ
စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားမှု သည် နေ့စဉ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပံ့ပိုးကူညီမှုရှိခြင်းအားဖြင့် စာဖတ်သူ၏
ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို တည်ဆောက်ပေးသည်။ ခြေလှမ်းစိပ်စိပ်လှမ်း ရာမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေးသူငယ်များကို
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျော်ပျော်နေတတ်ကြသဖြင့် သင်ယူခြင်းကို
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းစေရန် ဖန်တီးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏
လက်နက်များမှာ စိတ်ကူးစိတ်သန့်၊ ရယ်မောခြင်းနှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ အစအဦးဖြစ်သောစနစ်ဖြင့် သိပ္ပံနှင့်ဝိဇ္ဇာဟူသော
ကြားဖြတ်ချိတ်ဆက်မှုတွင် နားလည်မှုကိုတည်ဆောက် ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ကုန်၏ ထူးခြားထင်ရှားမှုများ
ကလေးသူငယ်များသည် ပင်ကိုယ်သဘာဝအရ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုစူးစမ်းလိုစိတ်အား ချိတ်ဆက်ယူခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် စာဖတ်ခြင်းကို လုပ်ရန်တာဝန်တစ်ရပ်အနေနှင့်မဟုတ်ဘဲ စွန့်စားခန်းတစ်ရပ် ဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ လှုံ့ဆော်မှု၊ ပျော်မွေ့မှုနှင့်
ချီးမြှင့်မှုကိုဖြစ်စေမည့် သင်ယူလေ့လာမှုအား တစ်သက်တာ
ထိုနေရာတွင် လွန်စွာကြီးမားသောလောကကြီးရှိနေပါသည်။ ၄င်းကို မိမိတို့အပိုင်ဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ရာတွင် ကလေးသူငယ်များသည် စိတ်ချမှုကိုလိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ စာဖတ်အားကောင်းသောသူများဖြစ်လာခြင်းက သူတို့အား ထိုသတ္တိကိုပေးပါလိမ့်မည်။ မိမိတို့ဘ၀အကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူများဖြစ်လာရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။
စာဖတ်ခြင်းသည် ဘ၀၏အဖိုးထိုက်တန်ဆုံးသော ပါရမီများအနက် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ သင်ယူမှုကိုပျော်ရွှင်
တတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးတိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်လေ့လာဆည်းပူးမှု သို့မဟုတ် ထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို အယုံအကြည်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က မှော်ဝင်လောက ကြီးတစ်ခုသို့ ၀င်ပေါက်များကိုဖွင့်ပေးပါသည်။
စစ်မှန်သောစာဖတ်ခြင်းသည် နားလည်မှုကိုလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာသင်သားများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေရခြင်း ထက်ပိုပြီးအရေးပါသောအရာ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ စကားလုံးများကို အတောင်ပံများအဖြစ် ထုဆစ်ပုံဖော်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးမှုနှင့်အားပေးတိုက်တွန်းမှုတို့ကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
THE I CAN READ (ငါစာဖတ်နိုင်ပြီ) စနစ်
The I Can Read (ငါစာဖတ်နိုင်ပြီ) စနစ်သည် မူလအစက ၁၉၉၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ် တို့ကြားတွင် Antony Earnshaw နှင့် Annabel Seargeant တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သုတေသနပြုမှုမှတစ်ဆင့် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ၄င်းသည် စနစ်ကျလျက် တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်စေပြီး အဆင့်အလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်ပါရှိသည့်အပြင် ၄င်းသည် အက္ခရာများ၏ကြီးမားသော အစုအဝေးများကို တမူထူးခြားသော သဘောတရားတစ်ခုအားဖြင့် သီးခြားအသံထွက် များအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပထမဦးဆုံးသောစနစ်ဖြစ်
The I Can Read (ငါစာဖတ်နိုင်ပြီ) စာဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်သည် မပြောင်းလဲနိုင်သည့် အသံထွက်များဖန်တီးရန် အက္ခရာများကို မည်သို့ပေါင်းစည်းကြောင်း ကျောင်းသားများကို မြင်တွေ့နိုင်စေပြီး ကျောင်းသားများကို မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင် စာဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအား ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ထားနိုင်ရန် စွမ်းအားကိုပေးပါသည်။
I Can Read (ငါစာဖတ်နိုင်ပြီ) စနစ်က စာဖတ်သူအသစ်များ
အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ မရှိမဖြစ် စွမ်းရည်သုံးရပ်ကို သင်ကြားပေးပါသည်။
• အက္ခရာချိတ်ဆက်မှု အသံထွက်အစုအဝေးများ၏ အမျိုးအစားများရောနှောခြင်း
I Can Read စာဖတ်ရှုမှုအစီအစဉ်သည် စာဖတ်သူအသစ်များက စာဖတ်ရှုမှုကိုစတင်သင်ယူပြီး အက္ခရာများကို အသံများအဖြစ်သို့ ရောယှက်ရသောအချိန်တွင်
ရင်ဆိုင်ရသောအခက်အခဲများကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ အက္ခရာပေါင်းများစွာနှင့် အက္ခရာအစုအဝေးများစွာတို့က အသံထွက်တစ်ခုထက်ပိုပြီး ဆက်နွယ်နေသောအခါတွင် စကား လုံးများကို မည်သို့အသံထွက်ရမည့်အကြောင်း သိရှိခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်း၊ဖြောင့်စင်း သော စကားလုံးများဖြင့်စတင်ပြီး ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏ သင်ယူမှုလမ်းတလျှောက်တွင် ထပ်ဆင့် တည်ဆောက်လျက် ပိုမိုခက်ခဲသော အသံထွက်အတွဲအစပ်များကို သင်ယူရာတွင် ရှေ့သို့တိုးတက်သွားစေပါသည်။
I CAN READ (ငါစာဖတ်နိုင်ပြီ) သည် အဘယ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး စာဖတ်စနစ်ဖြစ်နေရပါသနည်း?
I CAN READ (ငါစာဖတ်နိုင်ပြီ) သည် အဘယ်ကြောင့် မိဘများရွေးချယ်သည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ရပါသနည်း?
• သုတေသနပြုမှုနှစ်များနောက်တွင်မှ ပညာရေးဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်များက ဖန်တီးထားသောကြောင့်
• စာဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရရှိမှုများကို သုတေသနပြုမှု
အပေါ် အခြေခံသောစာတမ်းပြုမှုနှင့် ၁၅ နှစ်အထက် လုပ်သက်ရှိသည့် ပီအိပ်ခ်ျဒီ (PhD) ၊ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(BA)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (MA)၊ ဂုဏ်ထူးတန်း (Hons)၊ ပညာရေးဒီပလိုမာ (DipEd)၊ အက္ခရာ များ၊ စာပေနှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ (Master of Letters၊ Literature၊ Linguistics) နှင့်စိတ်ပညာ (Psychology) ဘွဲ့ရထားသောဆရာများက ဖန်တီးထားသောကြောင့်
• ICR ဖန်တီးသူများတို့သည် Pearson Education မှထုတ်ဝေသည့် “Dealing with Dyslexia and Reading Difficulties” ကို ရေးသားပြုစုသူများဖြစ်နေခြင်းကြောင့်
• စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတို့တွင် အစမ်းအသုံးပြုခဲ့သည့် ထောက်ခံချက်ရပြီးသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကြောင့်
• ကျောင်းသားပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ကျော်တို့ကို သင်
• ထိုစနစ်ကို ပါမောက္ခ Brian Nyrne (The Alphabetic Principle ကို ရေးသားသူ) က စာဖတ်ခြင်းကို သင်ကြားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လက်ရှိသုတေသနပြုမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုထားသောကြောင့်
• သင်သည် I Can Read ကိုရွေးချယ်သည်ဆိုပါက နှစ်ပေါင်း ၁၆ နှစ်ကျော် သက်သေထူခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စနစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည်ဈေးကွက် ဦးဆောင်သူဖြစ်နေပြီး ထိုနယ်ပယ်အတွင်းမှ လုပ်ငန်းကျွမ်း ကျင်သူများက ထောက်ခံအားပေးထားပါသည်။ အထောက်အထားဖြစ်သည့် “I Can Read ကိုရွေးလို့ကတော့ အမှား အယွင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဆိုသည်မှာ သိသာထင်ရှားပါသည်။
I Can Read သညျနှဈပေါငျး ၂၀ အတှအေ့ကွုံနှငျ့အောငျမွငျမှုကို ဆကျလကျကငျြးပနသေညျ။
၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈတှငျ I Can Read အမှတျတံဆိပျကိုသွစတွေးလတြှငျစတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး ၁၅
နှဈကွာပညာရေးစိတျပညာရှငျမြားမှစတငျခဲ့သညျ။ ယနတှေ့ငျစငျကာပူ၌ကြှနျုပျတို့သညျထိပျတနျးအင်ျဂလိပျစငျတာတဈခုဖွဈပွီးနိုငျငံပေါငျး ၁၅
နိုငျငံတှငျ စငျတာ ၂၀၀ ကြျော အထိတိုးခြဲ့ခဲ့သညျ။
I Can Read မှ ယနေ့ ပညာရေးစြေးကှကျနှငျ့သကျဆိုငျသော အကောငျးဆုံး သငျရိုးညှနျးတမျးကို ထောကျပံ့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏
သငျရိုးညှနျးတမျးမှ အကြိုးခံစားခဲ့ရသော ကလေးသူငယျ ၃၀၀,၀၀၀ ကြျော ၏အောငျမွငျမှုအတှအေ့ကွုံ
I Can Read ၏အောငျမွငျမှုမြားကိုဂုဏျပွုသညျ့အနဖွေငျ့လာမညျ့အနှဈ ၂၀ ကိုပုံဖျောမညျ့အမွငျအသဈမြားကို ကြှနျုပျတို့နှငျ့ အတူ ဝငှေပေးပါ။